Izindaba - Ukukhula KweCollagen Market
Ngokwemibiko yakamuva yakwamanye amazwe, imakethe ye-collagen yomhlaba kulindeleke ukuthi ifinyelele ku-US $ 7.5 billion ngonyaka ka-2027, ngenani lemali elinganiselwa ekukhuleni ngonyaka elinganiselwa ku-5.9%. Ukukhula kwemakethe kungabangelwa isidingo esinamandla se-collagen esisetshenziswa ekuhlinzweni kwezimonyo nasekwelapheni isilonda. Ukuthuthuka kwamandla okusetshenziswa kwabathengi, kuhambisana nokwaziwa kokuhlinzwa kwesikhumba, kukhuthaza ukufuneka komhlaba jikelele kwemikhiqizo.
Isikhumba senkomo, isikhumba sezingulube, izinkukhu nezinhlanzi yimithombo emine eyinhloko ye-collagen. Uma kuqhathaniswa neminye imithombo, kusukela ngo-2019, i-collagen evela kuma-akhawunti wezinkomo yesabelo esibalulekile esingu-35%, ngenxa yokunotha kwemithombo yezinkomo kanye nentengo ephansi uma iqhathaniswa nemithombo yasolwandle neyezingulube. Izinto eziphilayo zasolwandle ziphakeme kunalezo ezivela ezinkomeni noma ezingulubeni ngenxa yesilinganiso sazo sokumunca nokuphakama kokutholakala. Kodwa-ke, izindleko zemikhiqizo evela olwandle ziphakeme kakhulu kunalezo ezivela ezinkomeni nasezingulubeni, okulindeleke ukuthi kunciphise ukukhula komkhiqizo.
Ngenxa yesidingo esikhulu salo mkhiqizo njengesimamisi sokudla, imakethe ye-gelatin izoba sesikhundleni esiphakeme ngo-2019. Ukukhula kwezokudoba eNdiya naseChina kudonse abakhiqizi be-gelatin esifundeni sase-Asia Pacific ukusebenzisa izinhlanzi njengezinto zokusetshenziswa zokukhiqiza i-gelatin. Imakethe ye-collagen hydrolyzate nayo kulindeleke ukuthi ikhule ngokushesha okukhulu esikhathini sokubikezela, ngenxa yokusetshenziswa kwayo okwandayo ekulungiseni izicubu nasekusebenziseni amazinyo ekunakekelweni kwezempilo. Ukusetshenziswa okwandayo kwama-collagen hydrolysates yizinkampani ekwelapheni izifo ezihlobene namathambo, njenge-osteoarthritis, kube nomthelela ekuthuthukiseni le nsimu.
UGelken, njengomkhiqizi we-collagen ne-gelatin, sikhathazekile ngokukhula kwemakethe ye-collagen. Siyaqhubeka nokwenza ngcono amasu ethu wezobuchwepheshe namakethe ukuze sihlangabezane nezidingo zemakethe ye-collagen yomhlaba. Futhi singabaphakeli be-collagen eVietnam naseMelika ngentengo yokuncintisana nekhwalithi.